Mividiana Volo Volo Mahavelom-bolo Manam-boninkazo tsara tarehy - Fandefasana maimaim-poana ary tsy misy haba | WoopShop®
Volo miharo volo mirentirenty voninkazo
$7.99 Regular vidiny $12.99
Color Champagne volondavenona manga Purple Kafe Tantely mavokely Manga manga
Champagne volondavenona manga Purple Kafe Tantely mavokely Manga manga
Volo miharo volo voninkazo mihaja voninkazo - Champagne volondavenona manga tafaverina ary halefa raha vantany vao tafaverina ny tahiry.
Teknika tsy lalivay: fanjaitra
Size: 11 × 6.5 cm
Ny volon'ny volonay dia mahatonga ny volon-dohanao ho tsara tarehy sy milamina, mora entina sy esorina izy io. DIY ny taovolo ho an'ny fety na fiainana isan'andro. Ataovy madio sy milamina ny volonao, mahasambatra kokoa ianao!
Mamorona taovolo manintona: ireo barrettes volo ireo dia vita amin'ny rhinestone, kristaly faux ary firaka vy, mateza sy mamiratra; Ny kristaly mamirapiratra sy ny famolavolana perla kanto dia manome azy ireo kanto sy manintona, manampy am-bolo ny taovolo.
Manokana ho anao: manana rhinestones mamirapiratra sy manintona izy ireo, perla kanto mirindra, mamorona fomba Retro mahazatra ho anao, mamirapiratra izy ary toa tsara tarehy tokoa ka manome anao taovolo kanto isan-karazany.
Mahatonga anao ho tsara tarehy sy milamina ny volon'ny volo: mamirapiratra sy marefo ny endriny, tsy mora miova endrika, salama ary marevaka amin'ny hoditra, dia ho vaovao na dia efa ela aza no nanaovana azy. Ary matevina sy mora entina izy ireo, ahafahanao mitondra azy io na aiza na aiza.
1/2 × Volo Volo Voninkazo Voninkazo
Miorina amin'ny fanavaozana 79
Mahafinaritra ny mitazona tsara ny volo.
Voninkazo iray ihany no ananany